Iyi Ndiyo Nhaka Yedu Inobva Kuna Mwari | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuMexico Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha.”—ISA. 54:17.
Mwari akaitei kuti achengetedze Shoko rake Bhaibheri?
Zita raJehovha rakachengetedzwa sei kuti vanhu vake varishandise?
Tsanangura kuti Mwari akachengetedza sei chokwadi chake pasinei nezvose zvakaitwa kuti chisazivikanwa.
1. Jehovha akaratidza rudo nokuchengetedza chii nokuda kwevanhu?
JEHOVHA, “Mwari mupenyu uye anogara nokusingaperi,” akachengetedza shoko rake rinopa upenyu nokuda kwevanhu. Richaramba riripo, nokuti “shoko raJehovha rinogara nokusingaperi.” (1 Pet. 1:23-25) Tinoonga chaizvo kuti Jehovha akaratidza rudo nokuchengetedza mashoko akadaro anokosha ari muShoko rake Bhaibheri!
2. Mwari akachengetedza chii muShoko rake kuti vanhu vake vashandise?
2 Mwari akachengetedza zita raakazvitumidza muShoko rake kuti vanhu vake varishandise. Magwaro anotanga kutaura nezva“Jehovha Mwari” mu“nhoroondo yematenga nenyika.” (Gen. 2:4) Mwari akaita chishamiso chokunyora zita rake kanoverengeka pamatombo aiva neMirayiro Gumi. Somuenzaniso, murayiro wokutanga waitanga nokuti: “Ndini Jehovha Mwari wako.” (Eks. 20:1-17) Zita raMwari rinoramba riripo nokuti Changamire Ishe Jehovha akachengetedza Shoko rake uye zita rake pasinei nezvose zvinoedza kuitwa naSatani kuti azvitsakatise.—Pis. 73:28.
3. Kunyange zvazvo nhema dzezvitendero dziri kwose kwose, Mwari akachengetedza chii?
3 Jehovha akachengetedzawo chokwadi muShoko rake. Kunyange zvazvo nhema dzezvitendero dziri kwose kwose munyika, tinotenda chaizvo kuti Mwari akatipa chiedza chake nechokwadi! (Verenga Pisarema 43:3, 4.) Ruzhinji rwevanhu rwuri kufamba murima, asi isu tinoramba tichifamba muchiedza chatinopiwa naMwari tichifara.—1 Joh. 1:6, 7.
TINE NHAKA YATINOFANIRA KUKOSHESA
4, 5. Kubvira mugore ra1931 tave tiine ropafadzo ipi yakazonaka?
4 SevaKristu, tine nhaka inokosha. Rimwe duramazwi rinoti: “Nhaka yenyika inosanganisira zvose zvinoti tsika, mararamiro, kana kuti zvimwe zvinhu zvoupenyu zvave zviripo kwemakore zvichigashidzwa chizvarwa chimwe pashure pechimwe.” Nhaka yedu inobva kuna Mwari inosanganisira chikomborero chokuva noruzivo rwakarurama rweShoko rake uye kunyatsonzwisisa chokwadi chine chokuita naye uye zvinangwa zvake. Inosanganisirawo imwe ropafadzo inokosha chaizvo.
Takafara chaizvo kuva nezita rokuti Zvapupu zvaJehovha pagungano redu muna 1931
5 Ropafadzo iyoyo yakava chikamu chenhaka yedu pagungano redu rakaitirwa muColumbus, Ohio, U.S.A., muna 1931. Mabhii okuti “JW” ainge akanyorwa papurogiramu. Imwe hanzvadzi yakati: “Taifungidzira zvaimirirwa naJW, vamwe taifunga kuti Just Wait [Ingomirirai], Just Watch [Mirai Muone], uye zvakarurama zvacho.” Taimbonzi Vadzidzi veBhaibheri, asi takava nezita idzva rokuti Jehovah’s Witnesses [Zvapupu zvaJehovha] pakaitwa chisarudzo musi weSvondo, July 26, 1931. Takafara chaizvo kuva nezita iroro rinobva muMagwaro. (Verenga Isaya 43:12.) Imwe hama inoyeuka kuti: “Handifi ndakakanganwa maungira okushevedzera chaizvo uye kurova maoko zvakaitwa munzvimbo iyoyo yatainge takaungana.” Hapana chero chitendero munyika chaida zita iroro, asi Mwari atikomborera nokurishandisa kwatave tichiita kwemakore anopfuura 80. Chokwadi iropafadzo yakazonaka kuva Zvapupu zvaJehovha!
6. Nhaka yedu inobva kuna Mwari inosanganisira mashoko api akarurama?
6 Nhaka yedu inobva kuna Mwari inosanganisira mashoko akawanda akarurama uye anokosha ezvakaitika kare. Somuenzaniso, funga nezvaAbrahamu, Isaka, naJakobho. Varume ava nemhuri dzavo vanofanira kuva vaikurukura kuti vangafadza sei Jehovha. Saka hazvishamisi kuti Josefa uyo ainge akarurama akaramba kuita ufeve kuti ‘asatadzira Mwari.’ (Gen. 39:7-9) Tsika dzechiKristu dzaiitawo zvokugashidzwa kune vamwe nokuita zvokuvaudza nemuromo kana kuti nokuona zvaiitwa. Dzimwe dzacho dzaisanganisira maitirwo eKudya kwaShe Kwemanheru akagashidzwa ungano dzechiKristu nomuapostora Pauro. (1 VaK. 11:2, 23) Mazuva ano, manamatiro atinofanira kuita Mwari “nomudzimu nechokwadi” akanyorwa muShoko rake. (Verenga Johani 4:23, 24.) Bhaibheri rakaitirwa kuti vanhu vose vavhenekerwe, asi isu vashumiri vaJehovha tinonyanya kurikoshesa.
7. Nhaka yedu inosanganisira vimbiso ipi inofadza?
7 Nhaka yedu inosanganisirawo dzimwe nhoroondo dzakaitika munguva pfupi yapfuura dzinoratidza kuti ‘Jehovha ari kudivi redu.’ (Pis. 118:7) Izvi zvinoita kuti tinzwe takachengeteka, kunyange patinotambudzwa. Chikamu chinofadza chenhaka yedu iri kuramba ichiwedzera ivimbiso iyi: “‘Chero chombo chipi zvacho chichagadzirirwa kukurwisa hachizobudiriri, uye uchapa mhosva rurimi chero rupi zvarwo ruchakurwisa pakutongwa. Iyi inhaka yevashumiri vaJehovha, uye kururama kwavo kunobva kwandiri,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.” (Isa. 54:17) Hapana chombo chaSatani chinogona kutikuvadza zvachose.
8. Tichakurukurei munyaya ino neinotevera?
8 Satani akaedza kuparadza Shoko raMwari, kutsakatisa zita rokuti Jehovha, uye kuita kuti vanhu vasaziva chokwadi. Asi zvechokwadi haagoni kumirisana naJehovha, uyo akaita kuti zvose izvozvo zvikundikane. Munyaya ino neinotevera, tichaona (1) kuti Mwari akachengetedza sei Shoko rake; (2) kuti Jehovha akaita sei kuti zita rake rirambe riripo; uye (3) kuti nei tichiti chokwadi chatinacho chinobva kuna Baba vedu vokudenga uye kuti vanochichengetedza sei.
JEHOVHA AKACHENGETEDZA SHOKO RAKE
9-11. Mienzaniso ipi inoratidza kuti Bhaibheri rakapona pane zvakasiyana-siyana zvaiitwa kuti riparare?
9 Jehovha akachengetedza Shoko rake pasinei nezvipingamupinyi zvose. Imwe Encyclopedia yechechi yeRoma inoti: “Muna 1229, musangano wakaitirwa kuToulouse wakarambidza vanhuwo zvavo kushandisa [maBhaibheri emimwe mitauro] zvichiitirwa kurwisa vaAlbigenses nevaWaldenses . . . Musangano wakaitwa muna 1234 muTarragona, Spain, uchitungamirirwa naJames I wakarambidzawo [kushandiswa kwemaBhaibheri emimwe mitauro]. . . . Kekutanga muna 1559, muzinda wechechi yeRoma wakapindira panyaya yacho Paul IV paakanyora kuti kudhinda uye kuva [nemaBhaibheri] emimwe mitauro kwairambidzwa kunze kwekunge vapiwa mvumo.”
10 Bhaibheri rakachengetedzwa pasinei nezvakasiyana-siyana zvakaitwa kuti riparare. Munenge muna 1382, John Wycliffe nevamwe vake vakabudisa Bhaibheri rokutanga reChirungu. Mumwe mushanduri weBhaibheri aiva William Tyndale, uyo akaurayiwa muna 1536. Paainge akasungirirwa padanda, zvinonzi akashevedzera kuti, “Ishe, svinudzai maziso amambo weEngland.” Akabva adzipwa netambo ndokupiswa.
11 Bhaibheri rakapona pane zvose zvaida kuitwa kuti riparadzwe. Somuenzaniso, muna 1535, Bhaibheri reChirungu raMiles Coverdale rakabudiswa. Coverdale akashandura achishandisa “Testamende Itsva” yaTyndale uye “Testamende Yekare” kubva pana Genesisi kusvika kuna Makoronike. Akashandura zvimwe zvikamu zveMagwaro kubva muLatin uye muBhaibheri raMartin Luther rechiGerman. Mazuva ano, Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene inodiwa chaizvo nokuti yakajeka, inonyatsotaura zvinoenderana nezvinyorwa zvepakutanga, uye inobatsira chaizvo muushumiri hwedu. Tinofara chaizvo kuti hapana dhimoni kana munhu anokwanisa kuita kuti Shoko raJehovha risachengetedzwe.
KUCHENGETEDZA KWAKAITA JEHOVHA ZITA RAKE
Vanhu vakaita saTyndale vakabvuma kufira Shoko raMwari
12. Shanduro yeNyika Itsva yave ichibatsira zvakadini pakuchengetedza zita raMwari?
12 Jehovha Mwari akava nechokwadi chokuti zita rake rachengetedzwa muShoko rake. Panyaya iyi, Shanduro yeNyika Itsva iri kubatsira chaizvo. Mumashoko okutanga, dare revashanduri vacho vakazvipira rakanyora kuti: “Chinhu chikuru cheshanduro ino ndiko kudzorerwa kwezita raMwari munzvimbo yaro yakakodzera mumashoko eBhaibheri. Izvi zvakaitwa, pachishandiswa zita rinowanzogamuchirwa rechiShona rokuti ‘Jehovha’ ka6 973 muMagwaro echiHebheru uye ka237 muMagwaro echiKristu echiGiriki.” Iye zvino Bhaibheri reShanduro yeNyika Itsva rava kuwanikwa mumitauro inopfuura 116, rose zvaro kana kuti chikamu charo, uye maBhaibheri anopfuura 178 545 862 akadhindwa.
13. Nei zvinganzi zita raMwari rave richizivikanwa kubvira pakasikwa vanhu?
13 Zita raMwari rave richizivikanwa kubvira pakasikwa vanhu. Adhamu naEvha vairiziva, uye vainyatsoziva madudzirwo aro. Mafashamo apera, Hamu paasina kuremekedza baba vake, Noa akati: “Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari waShemu, uye Kenani [mwanakomana waHamu] ngaave muranda wake.” (Gen. 4:1; 9:26) Mwari pachake akati: “Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu; handizopi kukudzwa kwangu kune mumwe munhu.” Mwari akatiwo: “Ndini Jehovha, uye hakuna mumwezve. Kunze kwangu hakuna mumwe Mwari.” (Isa. 42:8; 45:5) Jehovha akava nechokwadi chokuti zita rake rachengetedzwa uye raziviswa kuvanhu pasi pose. Takakomborerwa chaizvo pakuti tinoshandisa zita raJehovha uye tinoshumira seZvapupu zvake! Tinotodaidzira tichiti: “Tichasimudza mireza yedu muzita raMwari wedu.”—Pis. 20:5.
14. Zita raMwari rinogona kuwanikwa kumwe kupi musiri muBhaibheri?
14 Zita raMwari harisi muBhaibheri chete. Funga nezveDombo reMoabhi, rakawanikwa kuDhiban (Dhibhoni), iri kumabvazuva kweGungwa Rakafa nemakiromita anosvika 21. Dombo racho rinotaura nezvaMambo waIsraeri Omri uye rine mashoko aMambo weMoabhi Mesha okupandukira kwaakaita Israeri. (1 Madz. 16:28; 2 Madz. 1:1; 3:4, 5) Asi tinonyanya kufarira Dombo reMoabhi nokuti rine mabhii mana echiHebheru anomiririra zita raMwari. Mabhii mana aya anowanikawo kakawanda muTsamba dzokuRakishi, zvaenga zvakawanikwa muIsrael.
15. Septuagint chii, uye yakavapo sei?
15 Vashanduri veBhaibheri vepakutangatanga vakabatsirawo pakuchengetedza zita raMwari. Pashure pokunge vaitwa nhapwa muBhabhironi, kubvira muna 607 B.C.E. kusvika muna 537 B.C.E., vaJudha vakawanda havana kuzodzokera kuJudha neIsraeri. Pakazosvika makore okuma200 B.C.E., guta reAlexandria, muEgypt, rainge rava nevaJudha vakawanda vaida shanduro yeMagwaro echiHebheru muchiGiriki chaishandiswa nenyika dzakawanda. Bhaibheri iroro rakapera mumakore okuma100 B.C.E., uye rinonzi Septuagint. Mamwe makopi eBhaibheri iri ane zita rokuti Jehovha asi rakanyorwa nemabhii mana echiHebheru.
16. Ipa muenzaniso wokushandiswa kwakaitwa zita raMwari mubhuku rakatanga kubudiswa mugore ra1640.
16 Zita raMwari riri muBay Psalm Book, bhuku rokutanga kubudiswa munyika dzokuAmerica dzaitongwa neEngland. Rokutanga racho (rakadhindwa muna 1640) rine Mapisarema, akashandurwa kubva muchiHebheru kuenda muChirungu chemazuva iwayo. Rinoshandisa zita raMwari mundima dzakadai saPisarema 1:1, 2, iyo inoti “munhu akaropafadzwa” haafambi muzano revakaipa, “asi anofarira chaizvo mutemo waIehovah.” Unogona kuwana mamwe mashoko ane chokuita nezita raMwari mubhurocha rinonzi Zita raMwari Richagara Nokusingaperi.
JEHOVHA ANOCHENGETEDZA CHOKWADI CHAKE
17, 18. (a) Ungatsanangura sei shoko rokuti “chokwadi”? (b) “Chokwadi chemashoko akanaka” chinosanganisira chii?
17 Tinoshumira “Jehovha Mwari wechokwadi” tichifara. (Pis. 31:5) Rimwe duramazwi rinoti: “Chokwadi nezvechimwe chinhu chinosanganisira maidi ose ane chokuita nacho, kwete zvinhu zvokufungidzira kana zvokuita zvokuruka.” MuchiHebheru cheBhaibheri, shoko rinowanzoshandurwa kuti “chokwadi” rine chokuita nechinhu chakavimbika, chakatendeka, chine maidi kana kuti chisiri chokunyepa. Shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “chokwadi” rinoreva chinhu chinoenderana nemaidi kana kuti chakakodzera uye chakarurama.
18 Jehovha akachengetedza chokwadi chake uye akaita kuti tirambe tichiwedzera kuchiziva. (2 Joh. 1, 2) Kunzwisisa kwatinoita chokwadi kunoramba kuchijeka zvishoma nezvishoma, nokuti “gwara revakarurama rakaita sechiedza chinopenya chinoramba chichiwedzera kupenya kusvikira ava masikati chaiwo”! (Zvir. 4:18) Zvechokwadi, tinonyatsobvumirana naJesu, uyo akati paainyengetera kuna Mwari: “Shoko renyu ichokwadi.” (Joh. 17:17) Shoko raMwari, Bhaibheri, rine “chokwadi chemashoko akanaka,” chine dzidziso dzose dzechiKristu. (VaG. 2:14) Dzidziso idzi dzinosanganisira maidi ane chokuita nezita raJehovha, uchangamire hwake, chibayiro chaJesu chorudzikinuro, rumuko, uye Umambo. Iye zvino ngatikurukurei kuchengetedza kwakaita Mwari chokwadi pasinei nezvaiedza kuitwa naSatani kuti vanhu vasachiziva.
JEHOVHA AKAITA KUTI KURWISA CHOKWADI KUKUNDIKANE
19, 20. Nimrodhi aiva ani, uye urongwa hupi hwakakundikana mumazuva ake?
19 Mafashamo apfuura, paiva nokutaura kwokuti: “SaNimrodhi muvhimi ane simba airwisana naJehovha.” (Gen. 10:9) Somunhu aipikisa Jehovha Mwari, Nimrodhi ainamata Satani uye ainge akaita sevapikisi vakanzi naJesu: “Munobva kuna baba venyu Dhiyabhorosi, uye munoda kuita zvinodiwa nababa venyu. Iye . . . haana kumira zvakasimba muchokwadi.”—Joh. 8:44.
20 Nzvimbo yaitongwa naNimrodhi yaisanganisira Bhabheri nemamwe maguta aiva pakati perwizi rwaTigrisi uye rwizi rwaYufratesi. (Gen. 10:10) Zvingangodaro kuti ndiye aitungamirira pakuvaka Bhabheri neshongwe yaro yakatanga munenge muna 2269 B.C.E. Vachiita zvaipesana nokuda kwaJehovha kwokuti vanhu vapararire panyika pose, vavaki ivavo vakati: “Uyai! Ngatizvivakire guta uyewo shongwe ine musoro unosvika kumatenga, uye ngatizviitirei zita rakakurumbira, kuti tirege kupararira panyika pose.” Asi vakazorega chirongwa ichocho Mwari paaka“vhiringidza mutauro wenyika yose” ndokuita kuti vavaki veshongwe yacho vapararire. (Gen. 11:1-4, 8, 9) Saka kana Satani ainge aronga kutanga chitendero chimwe chete, vanhu vose vachimunamata, zano rake rakashaya basa. Kugara nokugara, kunamatwa kwaJehovha kwave kuchikunda uye kuri kuwedzera zuva rega rega.
21, 22. (a) Nei chitendero chenhema chisina kumbobvira chava nengozi zvakanyanya zvokusvika pakutsakatisa kunamata kwechokwadi? (b) Tichakurukurei munyaya inotevera?
21 Chitendero chenhema hachina kumbobvira chava nengozi zvakanyanya zvokusvika pakutsakatisa kunamata kwechokwadi. Nei tichidaro? Nokuti Murayiridzi wedu Mukuru akava nechokwadi chokuti Shoko rake Bhaibheri rachengetedzwa, akaita kuti zita rake rirambe riripo, uye ave achingopa vanhu chokwadi chake. (Isa. 30:20, 21) Kunamata Mwari maererano nechokwadi kunounza mufaro, asi kunoda kuti tirambe takamuka pakunamata, tichinyatsovimba naJehovha uye tichibvuma kutungamirirwa nomudzimu wake mutsvene.
22 Munyaya inotevera tichaongorora kuti dzimwe dzidziso dzenhema dzakabva kupi? Tichaona kuti dzidziso idzi hadzisi dzechokwadi padzinoenzaniswa nezviri muMagwaro. Uye tichaonawo kuti Jehovha, Muchengetedzi wechokwadi asina mumwe waanoenzana naye, akatikomborera sei nokutipa dzidziso dzechokwadi dzatinokoshesa sechikamu chenhaka yedu inobva kwaari.